Kungani (nokuthi Ungakwenza Kanjani) Ukuhlanganisa Ukuphinda ungene kucebo lakho ledijithali | Martech Zone
Kungani (nokuthi Ungakwenza Kanjani) Ukuhlanganisa Ukuphinda ungene kucebo lakho ledijithali
NgoLwesithathu, uDisemba 5, 2012 Lwesibili, Disemba 4, 2012 UCaroline Watts
Ukubuyisela emuva, umkhuba wokunikeza izikhangiso kubantu abake basebenzisana nawe online, sekuyisithandwa sezwe lokumaketha ledijithali, futhi ngesizathu esizwakalayo: inamandla amakhulu futhi ibiza ngokweqile.
Ukuhlela kabusha, ngezindlela ezahlukahlukene, kungasebenza njengokuhambisana necebo elikhona ledijithali, futhi kungakusiza ukuthi uthole okuningi emikhankasweni osuvele uyayisebenzisa. Kulokhu okuthunyelwe ngizobhala ngezindlela ezimbalwa abathengisi abangasebenzisa ngazo ukuphinda bakhethe ukukhulisa amandla eziteshi asebevele bezisebenzisa. Kepha okokuqala, nansi isizinda esithe xaxa kubuchwepheshe uqobo:
Isebenza Kanjani Futhi I-Retargeting
Ngendlela elula kakhulu, i-retargeting isebenzisa ikhukhi lesiphequluli elilula, elingaziwa ukunikeza izikhangiso kuphela kubantu abavakashele iwebhusayithi yakho kodwa bashiya ngaphandle kokuthenga. Isebenza kahle kakhulu ngoba igxila kuzikhangiso zakho kubantu abajwayelene nokuthi kungenzeka babe nentshisekelo kumkhiqizo noma kusevisi yakho. Lokhu kukuvumela ukuthi ukhulise ukuguqulwa phakathi kwabantu abathintekayo futhi ugcine izindleko ziphansi ngokugcina amadola wakho wesikhangiso ezilalelini zakho ezifanele kakhulu.
Ubuchwepheshe obufanayo bungasetshenziswa nakwezinye izindlela ezahlukahlukene zokusebenzisana kwamakhasimende, njengokuvula i-imeyili, futhi kungaba umphelelisi osebenza ngokumangalisayo kwamanye amathuluzi wokumaketha owasebenzisela ukufinyelela kumakhasimende amasha noma ukuxhumana namanje.
Ukuphinda ubeke i-Search Marketers
Uma unikela isabelomali esibalulekile ku Ukusesha kwe-PPC, Ukubheka kabusha kufanele kucishe kufakwe kwi-arsenal yakho yedijithali. Izikhangiso zokusesha zingenye yezindlela ezinamandla kakhulu zokushayela ithrafikhi yokuqala esizeni sakho, kepha ingakanani leyo traffic eguqukayo ekuhambeleni kokuqala? Uma ufana nabakhangisi abaningi, iningi labantu obaletha kusayithi lakho aliguquli zisuka, uma liguqula nhlobo. Yilapho ukuphindisela kabusha kungena khona. Ukuhlela kabusha kukusiza ukuthi wandise ukuguqulwa phakathi kwamathemba abalulekile avakashele isiza sakho, kepha angakathengi.
Uma uthembele kakhulu ekuseshweni kwe-PPC, ukhokha imali enhle yokuletha abantu kusayithi lakho, futhi ukuphinda ufune kabusha kungakusiza ukwandise lokho kuchitha. Uma usebenzisa amakhasi okufika azinikele ethrafikhi yakho yokusesha ekhokhelwayo, kulula ngendlela elula ukubuyisa izivakashi ezivela kumakhasi akho okufika.
Ukubuyisela kabusha Abathengisi Bokuqukethwe
Enye yezinselelo ezinkulu ze abathengisi bokuqukethwe kuguqula abafundi abajwayelekile babe ngamakhasimende. Noma ukumaketha kokuqukethwe kuyindlela ephumelelayo emangalisayo yokukhuthaza ukuvakashelwa okusha kwewebhu, i-ROI enhle kaningi kunzima kakhulu ukuyifinyelela. Ukukhuthaza ukubhaliswa kwe-imeyili nokufaka njalo inani kungasiza, kepha kungahle kunganeli njalo. Uma uqhuba ngempumelelo ithrafikhi kokuqukethwe kwakho, kepha awuboni ukuguqulwa ongakuthanda, ukuphinda uhlele kabusha kungasiza.
Ungabuyisela emuva izivakashi eziya kusayithi lakho ukuze zifunde okuqukethwe kwakho, futhi uzikhuthaze ukuthi zihlole amakhasi wethu womkhiqizo namasevisi. Okuqukethwe kwakha izithameli ezifanele zebhizinisi lakho, futhi ukuphinda uqonde kabusha kungakusiza ukuguqula lezo zilaleli zibe amakhasimende.
Ukubuyisela kabusha Abathengisi be-imeyili
Ukumaketha nge-imeyili kuyithuluzi eliyisisekelo labathengisi abaningi bedijithali. Uma ugxile ku-imeyili, kungahle kungabonakali ukuthi ithuluzi lokukhangisa lokubonisa njengokuphinda uhlele kabusha lingasiza kanjani ngempumelelo, kepha ukubuyisela kabusha i-imeyili kuyithuluzi elihle labathengisi be-imeyili.
Ukuhlela kabusha i-imeyili kukuvumela ukuthi unikeze izikhangiso zokubonisa kunoma ngubani ovula i-imeyili, noma ngabe bayachofoza noma cha. Cabanga uma ngabe wonke umuntu ovula ama-imeyili akho angabona umkhiqizo wakho ngenkathi ephequlula iwebhu ngokuhamba kwesikhathi? Yilokho okwenziwa i-imeyili kabusha okungenziwa. Ungathumela ama-imeyili amaningi ngaphandle kokuqeda uhlu lwakho, futhi ukuphinda uhlele i-imeyili kunikeze ithuba lokuhlala phambi kwabamukeli bakho be-imeyili ngaphandle kokubacindezela ngemilayezo eyeqile ye-imeyili.
Uma unqikaza ukuqala umkhankaso wokubonisa ngoba usuvele wenza imikhankaso yokuthengisa ephumelelayo, ukwesaba kwakho kungahle kungabi nezizathu. Ukuhlela kabusha kungakusiza ukuthi uthole okuningi kuziteshi osuvele uzisebenzisa, noma yiziphi iziteshi ezingaba khona.
Tags: okuqukethwe kuphinda kubhekwe kabushaukubuyisela i-imeyili kabushaukusesha okukhokhelwe kubuyiselwa emuvaukubuyisela emuva i-ppci-retargeting
UCaroline Watts ungumphathi wezokukhangisa kwa ReTterter, umhlinzeki wesibonisi esigcwele osebenza ekubhekeni kabusha nasekuqondisweni kwezithameli.
Amamethrikhi Womthombo: Ukwenziwa Kwezokumaketha Komphakathi kanye Nezibalo
Ubuso obusha bokuSebenza kwe-Injini Yokucinga